गुगलमा अधिकांशले के खोज्छन्। – कर्णाली 24 डट कम
गुगलमा अधिकांशले के खोज्छन्।
Karnali 24२१ असार २०७८, सोमबार १३:२३
सूचना प्रविधिको यो युगमा मानिसहरुका लागि गुगल दैनिकी जस्तै बनेको छ । स साना जानकारीहरुका लागि समेत हामीहरु गुगलमा निर्भर भएका छौं । कसैले केही कुरा सोध्यो भने त्यसको जवाफ दिनुअघि हामी गुगलमा सर्च गर्न थाल्दछौं ।
पुरुषहरुको स्वास्थ्यका विषयमा अनलाइन परामर्श दिने वेबसाइट frommars.com ले गरेको एक अध्ययनमा गुगल सर्चकै माध्यमबाट पुरुषहरुको मनको कुरा जान्ने प्रयास गरियो । उक्त अध्ययनले पुरुषहरुले गुगलमा सबैभन्दा धेरै खोजी गर्ने पाँचवटा विषय पत्ता लगाएको छ । जुन यसप्रकार छन्।
यौनांगको उत्तेजना : पुरुषहरु आफ्नो यौनिकता तथा यौन क्षमताको विषयलाई लिएर निकै सोँचमग्न तथा चिन्तित हुन्छन् । उक्त अध्ययनका क्रममा गुगल सर्चमा धेरै पुरुषहरुले लिंगमा उत्तेजना कम हुनुका कारणका विषयमा अत्यधिक खोजी गर्ने गरेको पाइएको छ । कमजोर उत्तेजना नपुंशकताको संकेत हो कि होइन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ पुरुषहरुले गुगल सर्चमा निकै खोज्ने गरेका छन् । उनीहरु नपुंशकताको लक्षणका साथै आफु पनि कतै नपुंशक त छैन भन्ने कुरा जान्न चाहन्छन् गुगलको सहारा लिएर । अध्ययनको क्रममा विश्लेषण गरिएका मध्ये ६८ हजार ६ सय जना पुरुषले गुगल सर्चमा यो विषयको खोजी गरेका थिए ।
कपाल कसरी झर्दछ ? : पुरुषहरुले गुगल सर्चमा अत्यधिक खोजी गर्ने केही विषयहरु निकै रोचक पनि छन् । पुरुषहरु जान्न चाहन्छन् कि के चुल्ठी बाट्नाले वा टोपी लगाउनाले कपाल झर्न सक्दछ ? कपालको चिन्ता गरेर गुगलको सहारा लिनेहरु ५२ हजार २ सय जना थिए ।
व्यायाम र प्रोटिन : कतिपय पुरुषहरु आफ्नो फिटनेसलाई लिएर निकै चिन्तित हुन्छन् । उनीहरु व्यायाम गरे लगत्तै प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खानु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा जान्न चाहन्छन् । यदि प्रोटिन खानुपर्दछ भने कस्तो प्रोटिन खाने ? भन्ने कुरा पनि उनीहरुले गुगलमा सर्च गरिरहेका हुन्छन् । अध्ययनका क्रममा ५१ हजार जना पुरुषले उल्लेखित सवालको जवाफ गुगलमा खोज्ने प्रयत्न गरेका छन् ।
आज सुनको मुल्य ७ सय रुपैयाँले बढ्यो
१३ जेष्ठ २०७८, बिहीबार ११:०६
युरोकप २०२० अन्तगर्त आज ४ खेल हुदै।
७ असार २०७८, सोमबार ०८:२०
काेराेना बाट मृत्यु हुनेकाे परिवारले १५ हजार पाउने ।
१८ जेष्ठ २०७८, मंगलवार ०९:१६
१९ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०९:२२
जहाजभित्रै वेहाेस र रूवाबासी गरेका यात्रु सुरक्षित अवतरण भएपछि (भिडियाे सहित) २१ असार २०७८, सोमबार १३:२३
यिनै हुन् बुद्ध एयरको जहाजलाई ठुलो दु’र्घटनाबाट जोगाएर ७७ जनाको ज्यान बचाउने क्याप्टेन आङगेलु शेर्पा सम्मान स्वरुप सेयर गरौ।।(भिडियो सहित) २१ असार २०७८, सोमबार १३:२३
भर्खरै विराटनगरका लागि उडेको बुद्ध एयरको जाहाज ल्यान्ड हुन नसकेर पुनः काठमाडौंमा फर्कंदै २१ असार २०७८, सोमबार १३:२३